२०७५ मा उदाएका ९ नायक (भिडियो रिपोर्ट) | Kendrabindu Nepal Online News
21077917 753394 6414035 13910488
२०७५ मा उदाएका ९ नायक (भिडियो रिपोर्ट)
३० चैत्र २०७५, शनिबार १३:३४
हामी वर्ष २०७५ को अन्त्यमा आईसकेका छौं । वर्षको अन्त्यसँगै नेपाली रजतपटमा हुने गरेका हरेक क्रियाकलापहरुको समीक्षा भईरहँदा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर ‘केन्द्र बिन्दु डटकम’ ले यो वर्ष फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका केही नवनायकहरुको रिर्पोट तयार पारेको छ ।
वर्ष २०७५ निकै कम नवनायकलाई मात्र लक्की सावित भयो । एकाध बाहेक अधिकांश नवनायकले आफ्नो अभिनयले दर्शकलाई आकर्षित गर्न सकेनन् । यो वर्ष रजतपटमा प्रवेश गर्ने नायिकाहरुको तुलनामा नवनायकको सङ्ख्या निकै कम रह्यो । प्रदर्शनको हिसाबले लगभग ९५ वटा चलचित्रहरु प्रदर्शनमा आए तर आधा दर्जन चलचित्रहरु मात्र व्यापारिक रुपमा सफल भए ।
१) मुकुन भुषाल – बुलबुल
चलचित्र ‘बुलबुल’ बाट नेपाली रजटपटमा प्रवेश गरेका नायक हुन् मुकुन भुषाल । यो चलचित्रलाई बिनोद पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । राम्रो अभिनयको कारण मुकुन भुषालको चर्चा निकै चुलिएको थियो । ‘बुलबुल’ मा भुषालले चोपेन्द्रको भूमिका निभाएका थिए । यस चलचित्रले मध्यम व्यापार गरेको थियो । आम दर्शकले रुचाउने खालको हिरोइजम उनमा नभए पनि अब्बल अभिनयले गर्दा उनलाई सम्भावना बोकेको नायकको रुपमा लिन थालिएको छ ।
२) धिरज मगर – इन्टु मिन्टु लण्डनमा
यसै वर्ष अर्का मंगोलियन लुक्सका ‘चक्लेटी’ नायक धिरज मगरले पनि रजतपटमा इन्ट्रि गरे । उनले चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहसँग एउटै स्क्रिन शेयर गरे । रेनेशा बान्तवा राई निर्देशित चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ यो वर्षको एक सफल चलचित्रमा पर्दछ । पहिलो चलचित्र हिट भएपछि फिल्मी क्षेत्रमा धिरजको डिमाण्ड बढ्दै गएको छ । ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ पछि धिरजले नयाँ प्रोजक्ट ‘आईएम ट्वान्टी’ मा साइन गरेका छन् ।
३) हरिहर अधिकारी – शुभ लभ
यो वर्ष चर्चित युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीले पनि नेपाली रजतपटमा पाइला चाले । रियल लाईफमा ज्योतिषी पेसा अँगालेका युवा ज्योतिषी हरिहरले रिलमा पनि ज्योतिषको भूमिकामा निभाएका थिए । तर, उनी सोचे जति सफल हुन सकेनन् । उनी अभिनित चलचित्र ‘शुभ लभ’ १ साता पनि सिनेमा हलमा अडिन सकेन । चलचित्र प्रदर्शन हुनुअघि उनको जति चर्चा भयो, चलचित्र प्रदर्शन भएपछि उनको चर्चा एकाएक सेलायो । रियल लाईफमा उनको अभिनयलाई दर्शकले त्यति रुचाएनन् । अन्तत ः अधिकारीको पहिलो चलचित्र शुभ लभ फ्ल्प सावित भयो ।
४) आशिष पिया – समर लभ
केही वर्ष अघि सुविन भट्टराईले ‘समर लभ’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । ‘समर लभ’ युवायुवती माझ यति लोकप्रिय भयो कि, यो पुस्तक माथि चलचित्र नै बन्यो । ‘समर लभ’ पुस्तकबाट नाम सापटी लिएर निर्माण गरिएको चलचित्र ‘समर लभ’बाट डेब्यु गरेका नायक हुन् आशिष पिया । उनको कोरियन लुक्सले गर्दा उनी निकै चर्चामा आएका थिए तर उनको अभिनयलाई भने दर्शकले खासै रुचाएनन् । मुस्कान ढकाल निर्देशित चलचित्र ‘समर लभ’ माघ २५ गते ‘भ्यालेनटाइन डे’ को अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको थियो ।
५) उमेश थापा – बोबी
सत्य प्रेम कथामा निर्माण गरिएको चलचित्र ‘बोबी’ मार्फत उमेश थापाले रजतपटमा प्रवेश गरेका हुन् । थापाले आफ्नै प्रेम कथामा निर्माण भएको चलचित्र ‘बोबी’ मा अभिनय गरेका हुन् । बोबीलाई व्यापारिक रुपमा सफल चलचित्र मानिएको छ । बोबी असार २९ गते प्रदर्शनमा आएको थियो । चलचित्र बोबीको सफलतासँगै ‘बोबी २’ बन्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।
६) अभिषेक नेपाल – नाई नभन्नु ल ५
अभिषेक नेपालले भाद्र ८ गते प्रर्दशनमा आएको चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ५’ बाट डेब्यु गरेका हुन् । विकासराज आचार्य निर्देशित चलचित्रमा अभिषेक नेपाल र स्वस्तिमा खड्का मुख्य भूमिकामा छन् । तर, यस चलचित्रको जति चर्चा भयो त्यति अभिषेकको भने चर्चा भएन । ‘नाई नभन्नु ल ५’ पछि उनको हातमा अर्को कुनै चलचित्र परेको छ्रैन ।
७) समुन्द्र पण्डित – अनुराग
समुन्द्र पण्डितले चलचित्र ‘अनुराग’ मार्फत सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरे । चलचित्र अनुरागमा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम र समुन्द्र पण्डितले एउटै स्क्रिन शेयर गरेका हुन् । तर, यो चलचित्र पनि व्यापारिक रुपमा सफल हुन सकेन । साथै पण्डितको अभिनयलााई पनि खासै रुचाइएन । सत्यराज चौलागाई निर्देशित चलचित्र असोज १२ गते प्रदर्शनमा आएको थियो ।
८) कविर खड्का – लम्फु
नवनायक कबिर खड्काले चलचित्र ‘लम्फु’बाट आफ्नो फिल्मी करियर सुरु गरेका छन् । गोपाल चन्द्र लामिछाने निर्देशित चलचित्र ‘लम्फु’ ले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गर्न सकेन । उनी अभिनित चलचित्र त्यति सफल नभए पनि उनललाई ‘तिमी र म’ चलचित्रको अफर आएको थियो । कबिरले उक्त चलचित्र साइन गरिसकेका छन् । खड्का अभिनित चलचित्र सफल नभए पनि उनी फिल्मकर्मीको नजरमा भने पर्न सफल नायक हुन् ।
९) सुनिल क्षेत्री – चि मुसी चि
नवनायक सुनिल क्षेत्रीले चलचित्र ‘चि मुसी चि’ बाट डेब्यु गरेका छन् । यो चलचित्र साउन ११ गते प्रदर्शनमा आएको थियो । चलचित्र ‘चि मुसी चि’ पनि व्यापारिक रुपमा सफल हुन सकेन । साथै नव नायक सुनिलको त्यति चर्चा पनि भएन । चलचित्र ‘चि मुसी चि’ पछि सुनिललाई कुनै नयाँ चलचित्रको अफर आएको छैन ।
Aashis piya, Abhishek Nepal, Actor of 2075, Dhiraj magar, harihar adhakari, Mukun BHusal, samudra pandit, Umesh thapa
Prevनयाँ बर्षमा पूर्वराजाको सन्देश- ‘बितेका वर्षहरुको सुक्ष्म समीक्षा गरौँ’
नेपाल र युएईबीचको खेल रोकियोNext
कुम्भ राशीको २०१८, चर्चित ज्योतिष हरिहर अधिकारीको भविश्यबाणी (भिडियोमा)
मकर राशीको २०१८, चर्चित ज्योतिष हरिहर अधिकारीको भविश्यबाणी (भिडियोमा)
बृष राशीको २०१८, चर्चित ज्योतिष हरिहर अधिकारीको भविश्यबाणी (भिडियोमा)
रुकुम घटना : संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार राहत
सिन्धुपाल्चोकमा आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगित
त्रिभुवन राजपथमा पहिरो : एक जना बेपत्ता, चार गाडी पुरिए, उद्धार जारी
'शवबाट सङ्क्रमण सर्दैन' : स्वास्थ्य मन्त्रालय
विराटनगरमा एकै दिन ६० संक्रमित, लकडाउन भदौ ५ गतेसम्म थपियो
‘अस्पताल सिल’ भनेको के हो ? यसो भन्छन्, स्वास्थ्यविज्ञ
स्वास्थ्यकर्मीबाटै संक्रमणको जोखिम, कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ?
दुई दिनमा ३५ संक्रमित भेटिएपछि वीरेन्द्रनगरमा पाँच दिन निषेधाज्ञा
'कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरेर सेवा देऊ' : राष्ट्र बैंक